teskmanagerပြောက်နေရင် ပြန်ဖေါ်နည်း - .::just for share::.
Home » computer-tips » teskmanagerပြောက်နေရင် ပြန်ဖေါ်နည်း
Darkling Ko Darkling
Task Manager ပျောက်နေတာလေး ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့..
Start --> Run ထဲမှာ gpedit.msc ဆိုပြီး Enter ခေါက်။
Group Policy Editor ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ User Configuration --> Administrative Templates --> system --> Ctrl+Alt+Del Options မှာ select လုပ်လိုက်ရင် ညာဘက်ချမ်းမှာ Remove Task Manager ဆိုတာပေါ်မှာ ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ် Disabled ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။ပြီးရင် Apply ရယ် OK ရယ်ကို နှိပ်ပေးပါ။ Group Policy ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါမှ ပြန်မပေါ်သေးဘူးဆိုရင် ခုနကလမ်းကြောင်း အတိုင်းပြန်ဝင်Remove Task Manager ကိုရောက်ရင် ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး Not configured ကိုပြန်ရွေးပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျိန်းသေ ပြန်ပေါ်လာပါလ်ိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါစေဗျာ